Izy io dia manana karazana M, MX, MH, ST. Vita amin'ny horonan-tsarimihetsika PET polyester vita amin'ny fantsom-bolo izy io ary manenona amin'ny kofehy samihafa. Toy ny polyester na rayon. Ampiasaina indrindra amin'ny amboradara solosaina sy kojakoja fanaovana asa-tanana ho an'ny asa-tanana, lamaody, amboradara hafa.
Ny kofehy metaly MH dia manana loko fanamiana manankarena mamirapiratra mamirapiratra sy kalitao azo antoka. Izy io dia kofehy haingon-trano sy kofehy amboradara tsara ho an'ny lamba fanenomana, lamba voatenona sy akanjo ba ary akanjo hafa.
Kavina metaly metaly
Ny kiran'ny metaly M dia tapaka avy amin'ny sarimihetsika polyester PET, mamirapiratra, mamirapiratra miloko. Nampiasaina matetika hanenomana lamba ho an'ny vokatra fanadiovana, akanjo vita amin'ny tenona ary koa ny akora
amin'ny fanaovana kofehy metaly karazana ST, MX ary MH.
Kofehy metaly karazana MX
Ny kiran'ny metaly MX dia vita amin'ny famolahana kofehy metaly karazana M miaraka amina kofehy poliestery na 1ply. Ampiasaina be amin'ny famokarana mari-pamantarana marika, asa tanana sns.
Kofehy metaly karazana MH
Ny kofehy metaly karazana MH dia vita amin'ny 1ply amin'ny kiran'ny metaly M karazana voadidy amin'ny kofehy hafa ary ampiasaina amin'ny lamba fanenomana, lamba fanjairana, akanjo ba, fehiloha, ba kiraro, vokatra krismasy, sns.
ST karazana vita amin'ny metaly
Kofehy metaly karazana ST dia vita amin'ny kofehy volamena sy volafotsy mifangaro amin'ny kofehy hafa. Manana loko isan-karazany izy ary mamirapiratra tsara tarehy, ampiasaina indrindra amin'ny amboradara
12μ * 1/110 "75D MH Type Polyester metaly metaly
Kodiarana metaly metaly MH
M Karazana 100% Metaly Yarn
MHS karazana kiran'ny metaly volamena
MX Karazana metaly metaly